कोरोना संक्रमित नेपालीले भनिन्– १३ दिनसम्म पनि निको हुने छाँटकाँट छैन, सावधान रहनुस्‌ ! « Online Tv Nepal
Published : 23 March, 2020 10:04 am
संक्रमण निकै पीडादायक रहेको र १३ दिनसम्म पनि निको हुने छाँटकाँट नरहेको भन्दै उनले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेकी हुन् ।
लमजुङ तार्कुघाट स्थायी घर भइ हाल बेलायतको लण्डनमा बस्दै आएकी रानाभाटले १० दिनको सेल्फ आइसोलेसनपछि कोभिड–१९ सँग लडिरहेको र १३ दिनसम्म पनि निको हुने छाँटकाट नदेखिएको उल्लेख गरेकी छिन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबारे सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने सोच नभएको भएपनि कोरोनाले आफन्त र साथिभाइलाई थप भयावह बनाउन भन्ने लागेर आफूले सतर्क गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।फेसबुकमा रानाभाटले लेखेकी छिन्‌, ‘१० दिनको सेल्फ़ आइसोलेसन पछि COVID 19 सँग लड्दै !!
यो महामारी कति पीडादायक हुँदो रहेछ, आज १३ दिनसम्म पनि निको हुने छाँट्काटै छैन, फ़ेसबुकमा राख्ने सोच थिएन, कतै आफन्त अनि साथीभाईलाई थप भयावह बनाउला भन्ने लाग्यो, तर सोचेँ। सबैले साबधानी अपनाउन सक्नुहुनेछ । हजुरहरू सबैलाई विशेष सावधान रहन अनुरोध गर्दछु।’